SomaliNet Magazine: FANKA IYO SUUGAANTA - SHEEKO TAXANE AH: KULANKII BARAKAYSNAA
Labadii qaybood oo hore waxaan la soconay Faysal iyo Ayaan oo telefoon iskula hadlay kaddib markii ay waqti badan kala lunsanaayeen. Ayaan oo waraaq Faysal u soo dirtay iyo sidii uu Faysal ku helay Talefoonka Ayaan, waxaan kale oo la soconay sidii uu xiriirkoodu ku bilowday.
Ayaan intii ka danbaysay markay Faysal is maqleen waxaa ku bilowday wel-wel iyo isla hadal, waxay is tustay inay ku dadaasho sidii ay xiriir ula samayn lahayd Faysal. Waxa ay hubtay inay u baahan tahay inay Faysal la sheekaysato. Su?aasha ah iyada oo la qabo sidee ayay nin kale ula xiriiraysaa? Ma ahayn arrin ay iska indha tiri karto, waxaa intaas sii dheer inay diinta wax ka taqaan oo ayna dareensan tahay inay tahay qof marwo ah oo la qabo, mar kastana waxaa ka tan badinayay jacaylka iyo baahida ay Faysal u qabto. Tilaabadii Koowaad oo ay qaadday waxay ahayd inay soo furatay santuukh boosto oo iyada gaar u ah. Markii ay Boosatada ka soo noqotay ayay sidii ballantu ahayd waraaq u qortay Faysal. Waa ay jeclday inay hadal badan u qorto hadana waxay is tustay inay hubsato inuu helay waraaqdii hore iyo in kale, waxay kale oo is tustay bal inay sugto jawaabtiisa kaddibna ay qiimayso hadaladiisa, waraaq kooban ayay qoray iyada oo leh:
Aboowe Faysal, waxaan kuu soo dirayaa salaan aad u qiimo badan, kaddib anigu waan caafimaad qabaa, sidaan horay kuugu sheegay, waxaa jira wax yaalo badan oo aan doonayo inaan kaala sheekaysto, haddana waxaan doonayaa inaan hubsado inaad waraaqdii hore heshay iyo in kale, waan kaa warsugayaa. Waa kaas cinwaaka aad mar kasta igala soo xiriiri kartid. Waad ku mahadsan tahay inaadan Telefoon ii soo dirin mar danbe, taas macneheedu ma ahan inaanan doonayn inaan kula hadlo, laakiin waxaa jira arrimo kale oo aanan hadda doonayn inaan waraaqda uga hadlo.
Intaas iyo nabadgelyo
Shiikh Cali waa uu dareemay in Ayaan wax weyn ka khaldan yihiin. Marar badan ayuu isku dayay inuu waraysto oo waydiiyo dhibaatada haysata haddana kuma uusan guulaysan. Waxaa dhacday marar dhawr ah oo uu la hadlay inayan u jawaabin, markasta qolka oo mugdi ah ayay ku jirtaa, markii ay ka soo baxdo indheheedu waa guduud. Shiikh Cali meel uu wax ka bilaabo ayuu garan waayay. Waaridkeed iyo walaaleheed uma uu dacwoon karo waayo wax cad oo uu sheego ma uu hayo. Kaligiisna go?aan iskama gaari karo, mar kasta oo uu ku fakaro inuu wax uun sameeyo waxaa hor yimaada sidii sharafta lahayd oo Ayaan loogu daray iyo wanaagii faraha badnaa oo soo dhex maray, waxaa intas sii dheer in isaga iyo Ayaan ayan ahayn labo qof oo is qaba kaliya ee ay ka dhexayso qaraabanimo. Marar badan wuxuu ku fakaray dhibaatada iyo wanaagga uu leeyahay guurka qaraabadu. Shiikh Cali waligiis kuma uusan kicin wax Ayaan dhibsato, markii uu xisaabtamo marna waa u soo bixi wayday wax uu is oran karo Ayaan waxaas ayay qoonsatay, wuxuusan marna xisaabta ku darin in Ayaan jeceshahay qof kale, markii u horraysay oo uu guursday Ayaan aamuskeeda wuxuu ku fasiray inuu yahay xishood.
Faysal Boostada ayuu ka soo saaray waraaqdii ay Ayaan u soo dirtay, horay ayuu ka dareemay inay Ayaan ka timid, isla markii ayuu furay wuxuuna ku dhex akhriyay isaga oo gaarigiisa ku dhex jira, wadnihiisu aad ayuu u garaacayay, eray kasta oo uu akhriyaa macne weyn ayuu samaynayay, wuxuu dareemay in Ayaan ay wali jeceshahay, markii uu dhammeeyay ayuu mar labaad bilaabay isaga oo si deggen u akhrinaya kuna fakaraya sidii uu uga jawaabi lahaa, isla markii wuxuu xusuustay inuusan aqoon cinwaankeeda iyo inuu sugo inta uu ka helayo cinwaankeeda. Marar kale oo fara badan ayuu akhriyay, habeenkii markuu gurigiisii tagey ayuu xusuus qorkiisa ku qoray waraaqdii uu Ayaan ka helay iyo macnihii ay xanbaarsanayd, ?caawa waa habeyn farxad leh? ayuu iskula hadlay, wuxuu is tusay in uusan khamro afkiisa saarin. Markii uu damcay inuu seexdo ayaa hurdadii ayaa fakar daraadiis ka imaan wayday, wuxuu is tusay inuu Ayaan Jawaab u qoro kaddibna uu markuu cinwaankeeda helo uu u diro, wuxuu bilaabay inuu waraaqdaan u qoro.
Waxaad iga hanataa salaan aad iyo aad u qiimo badan, kaddib aad ayay ii faraxad galisay warqadaad ii soo dirtay, sidoo kale waxaan aad ugu farxay markaan maqlay codkaaga.
Anigu aad ayaan u caafimaad qabaa adiga waxaan Ilaahay kaaga baryayaa caafimaad iyo barwaaqo. Haddii aan waraaqdaada u soo noqdo run ahaantii si aadan qiyaasi karin ayay ii farxad galisay, waxayna I soo xusuusisay waraaqihii aynu isu qori jirnay inaga oo hal magaalo isla joogna. Waa jirtaa inayan waraaqdaadu ka jawaabin su?aalo badan oo aan xagaaga iska waydiin jiray, waxaanse u fahmay sida aad adiguba xustay inaad marka koowaad aad doonaysid inaad hubsatid in cinwaan kaygu sax yahay iyo in kale. Arrinta ah inaadan ila hadlin markaan ku soo wacay uma qaadan xumaan, waana qiyaasi karaa inay kugu noqotay arrin culus waayo aniguba waa welwel sanaa inataanan ku soo wicin. Sida aad u jeceshahay inaad arrimo badan igala sheekaysatid ayaan aniguba u jeclahay inaan kuula sheekaysto, sida aad u jeceshahay inaan ka shekaysano heerarkii uu jacaylkeenu soo maray ayaan anigu u jeclahay, in kasta oo aan haysto xusuus qor ay ku qoran yihiin xiriirkeenu sidii uu ku bilowday iyo marxaladihii uu soo maray, hadana waad qiyaasi kartaa farqiga u dhexeeya markaan adiga kula hadlayo iyo markaan buug akhrinayo. Haddii aan anigu waraysiga aan is waraysanayno iska bilaabo, waadigii igu ogaa aniga oo Kenya jooga, markii ninka lagugu daray oo aad Australia u dhooftay waxaa igu bilowday welwel aad u fara badan, waxaa ii muuqtay inay rajadii aan adduunka ka lahaa ay soo yaraatay, sidaad ula socotay ma ayan jirin dad ehel ama qaraabo ah oo dibadda iga soo taakulayn karay, Kenyana ma lahayn shaqo laga shaqaysan karo, Soomaaliyana noqosho ma lahayn waayo dhibaatadii aan uga soo tagey waaba sii badatay. Fakarkii iyo isla hadalkii wuxuu isu badalay xanuun aan dareemayo. Dhallinyardii aan isku xaafadda ahaan jirnay oo aan la degenaa ayaa dareemay in wax weyn iga khaldan yihiin, iyaga oo is leh ninkaan caawiya ayay igu dhiirro galiyeen inaan qayilaad bilaabo, waa ogsoonaa inaan balwadi dhibaato xallin karin haddana jaadkii wuxuu iga caawiyay inaan habaynkiina isaga ku soo jeedo maalintiina aan seexdo, inta aan qayilayo adiga ayaan kugu fakari jiray. Waxaan marar badan ku fakari jiray cidda mas?uulka ka ah inaan is gafno, waxaa ii soo bixi jirtay inaan anigu qayb ku leeyahay, in kasta oo haddii qaybtayda gadaal loo sii raaco ay u muuqnayso inaan wax weyn ku lahayn waayo anigu sabab uma ahi inaan ka dhashay reer faqiir ah, anigu sabab uma ahi inaan soo qaxno. Adiga laftigaagu qayb ayaad ku yeelanaysaa waayo waaridkaa ayaad ku raacday taladii ay soo jeediyeen adiga oo fiirinaya dhibaatada qoyska haysta iyo sida aad u caawin kartid haddaad dhooftid waana arrin meesha ku jirta maadaama aanan anigu waxba ka qaban karin dhiabatooyinka markaas taagnaa. Sidoo kale anigu danbi kula lihi inaan ka dhashay qabiil aan waaridkaa la doonayn gabadhooda. Sidii aan halkaan ku imid iyo wax yaalihii aan halkaan kala kulmay aniga ayaa haddii Ilaahay yiraahdo waraaqda danbe kuugu sheegi doona.